Lumen5: Mamerina lahatsoratra ho an'ireo horonan-tsary sosialy mampiasa AI | Martech Zone
Lumen5: Mamerina lahatsoratra ho an'ny horonan-tsary sosialy mampiasa AI
Alahady, Martsa 25, 2018 Douglas Karr
Tsy dia matetika aho no mientanentana amin'ny sehatra iray ary avy hatrany dia misoratra anarana amin'ny kaonty misy karama, saingy i Lumen5 dia mety ho ilay fampiharana horonantsary sosialy tonga lafatra. Mahatalanjona ny fampifanarahan'ny mpampiasa azy, ny fanaingoana voafetra dia mahatonga ny zavatra ho tsotra, ary ny tanjona dia mahatratra ny tanjona kendrena. Ity misy horonantsary topimaso:
Lumen5 Social Video Platform dia manasongadina:
Lahatsoratra amin'ny horonan-tsary - Manova mora foana ny lahatsoratra sy ny bilaogy ho atiny video. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fampidirana RSS Feed, fampidirana rohy mankany amin'ny lahatsoratranao, na fandikana sy fametahana ny atiny.
Fandehanana miasa mandeha ho azy - Ny Lumen5 dia mampiditra ny fampiasana ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny fianarana milina hananganana ny seho anao, hametraka mialoha ny lahatsoratrao ary hanasongadinana ireo teny lakile. Mazava ho azy, ny rehetra dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny mpanorina azy - fa manome anao lohalaharana lehibe izany!
Media Library - Tranomboky azo tadiavina miaraka amina fisie antontan-taratasy maimaim-poana an-tapitrisany, ao anatin'izany ny horonan-tsary, sary mbola ary mozika.
Safidy marika - Ataovy miavaka ny horonan-tsarinao mba hifanaraka amin'ny bika aman'endriny. Afaka misafidy amin'ny endritsoratra sasany ianao na mampakatra ny anao manokana. Ho fanampin'izay, azonao atao ny mampakatra ny sary famantarana sy fari-dranonao manokana!
Video Format - Arakaraka ny drafitra fisoratana anarana azonao atao, azonao atao ny mandefa horonantsary amin'ny 480p, 720p, na 1080p ary koa manamboatra ny endrika 16: 9 endrika fizahan-tany na endrika 1: 1 toradroa ho an'ny sehatra toa ny Instagram.
Fampidirana Facebook - Ampidiro mivantana ao amin'ny Facebook ny horonan-tsarinao na amin'ny kaontinao manokana na amin'ny pejy Facebook-nao.
Tao anatin'ny minitra vitsy dia afaka nanamboatra sy namboarina ity horonantsary ity ho an'ilay lahatsoratra vao nosoratako aho Torohevitra fitantanana fotoana ho an'ny mpivarotra.
Ary, tao anatin'ny segondra vitsy dia afaka namerina ilay horonan-tsary aho ary nanova ny habeny ho an'ny Instagram.
Amboary ny horonantsary media sosialinao voalohany
Tags: horonantsary facebookhoronantsary instagramlumen5manaova horonantsaryhoronantsary sosialympanamboatra horonan-tsary
Ahoana no fomba fisorohana ny Ad fraud.txt sy Ads.cert?
Amin'ny lafiny iray eo anelanelan'ny SPAM sy ny Creepy mandainga mangarahara